Taariikhda abaalmarinta BBC ee cayaaryahanka sanadka Africa - BBC News Somali
Taariikhda abaalmarinta BBC ee cayaaryahanka sanadka Africa
Abaalmarinta cayaaryahanka sanadka ee Afrika waxa u codeeya taageerayaasha cayaaraha kubadda cagta ee Dunida.
Tartankan waxa daaha laga rogay 1992-kii, waxaana wakhtigaa la oron jiray xidiga sanadka ee cayaaraha Afrika ee BBC-da. Abedi Pele oo u dhashay dalka Ghana ayaa noqday cayaaryahankii ugu horeeyey ee ku guulayata abaal marinta.
Abaal marinta ayaa marxalado kala gedisan soo martay. Waxa marka hore magacyadda cayaartoyda loo bandhigayaa weriyayaal ka soo jeeda Qaarada Afrika oo ah kuwa tabiya wararka cayaaraha.
Waxay kaddib soo xulayaan shan cayaartoy, kuwaas oo kaddib magacyadooda loo bandhigayo taageerayaasha kubbadda cagta si ay ugu codeeyaan kan ay is leeyihiin wuu ugu wanaagsanayahay.
Kaddib qofkii guulaysto ayaa la shaacinayaa, waxaana la guddoonsiinayaa koob ay ku xusanyihiin magcyadda dadkii ka horeeyey ee tartanka ku guulaystay, magacyadaas oo ay ka mid yihiin George Weah, Didier Drogba, Jay-Jay Okocha, Yaya Toure iyo Sammy Kuffuor.
Halkan ka akhri taarikhda Cayaaryahanadii horay ugu guulaystay abaal marintan.
2013 Yaya Toure –Xulka Qaran ee Ivory Coast iyo kooxda Manchester City (England).
Yaya Toure oo dhaxda ka dheela ayaa shan sano oo xiriir ku soo baxay liiska cayaaryahanada codka loo qaaday, waxa uuna ugu dambeyntii abaal marinta ku guulaystay sanadkii tagay ee 2013-kii. oo uu ku soo baxay liiska waxa uu ugu dambeyntii guulaystay
sanadkii tagay. Sanadka 2013-ka waxa uu ahaa sanad, Yaya Toure uu muujiyey cayaar wanaagsan naadiga uu u ciyaaro, waxa uu xiray goolal uu ku xiray gool ku laad yo aad u wanaagsanaa.
Waxa uu door muhiim ah ka qaatay in kooxdiisa Qaran ee Ivory Coast u soo baxdo Tartanka kubadda cagta ee Dunida ee lagu qabtay Dalka Brazil, 20014-ka.
Waxa uu sheegay in uu ku faraxsanyahay in uu ku guulaystay abaal marinta ‘’ waa arrin muhiiimad gaar ah ii leh, sabaabtoo ah ma ah go’aan uu gaaray maamulaha naadiga ama hoggaanka kooxda Qaran, waa go’aan ay gaareen taageerayaasha’’ ayuu yiri markii la guddoonsiiyey koobka.
2012 Christopher Katongo –Xulka Qaran ee Zambia iyo kooxda Henan Construction ee Shiinaha
Waa weeraryahan ka cayaara dhaxda. Waxa uu ku guulaystay abaal marinta kaddib markii uu kooxdiisa Qaran ee Zambiya uu ku hoggaamiyey guusha ay ka gaartay cayaarihii tartanka kubadda Cagta ee Qaarada Afrika. Kooxdiisu ma ahayn mid aad loo filayey in guulaysan karto balse guusheeda ayaa waxay sidoo kale ku soo beegantay sanad guuradii 20-tanaad ee ka soo wareegtay diyaaradii la dhacday kooxdii Qaran ee Zambia 1992-kii.
Christopher Katongo wax ka tirsanyahay ciidamada Zambia. Waxa uu sheegay in guushaasi tahay mid aanu ilaabi doonin noloshiisa ‘’ Marka aad tahay Cayaartay waxaad u baahantahay in aad guul gaarto, guushana waxa uu sabab ah taageerayaasha ama dadka xiiseeya cayaaraha, kuwaas oo aqoonsaday dadaalkeyga’’ ayuu yri.
2011 Andre Ayew –Xulka Qaran ee Ghana iyo kooxda Naadiga Marseille ee Farasiiska.
Ayew waa 21 sano jir, wuxuuna noqday cayaaryahankii ugu horeeyey oo qaada tubtii aabihii oo ku guulaysta abaal marinta. Waxa dhalay Abedi Pele oo isagu 20 sano ka hor ku guulaystay isla abaal marintan.
Ayew waxa uu sidoo kale noqday cayaaryahankii shanaad ee ka soo jeeda Ghana ee ku guulaystay abaal marinta.
Kaddib markii uu taarikh ka dhigay tartamada kubadda Cagta ee Afrika iyo tan caalamka ee 2010-kii la qabtay, Ayew waxa uu muhiimad weyn u yeeshay naadigiisa Marseille
Waxa uu yiri ‘’ waxan dareemayaa farxad iyo filan waa, gaar ahaan marka aan eego cayaaryahanada qiimaha weyn leh ee horay ugu guulaystay Tartankan’’
2010 Asamoah Gyan –Xulka Ghana iyo Naadiga Sunderland (England)
Gyan waxa uu ku guulaystay abaal marinta kaddib sanad aanan la ilaabi Karin oo uu door muhiim ah ka qaatay guusha ay gaartay kooxdiisa xulka Qaran ee Ghana ee Black Stars. Kooxda ayaa wareegyadda ugu dambeeyey waxay ka gaartay Tartanka kubadda cagta ee Qaarada Afrika iyo kan dunida.
Horraantii 2010-kii waxa uu xiray saddex gool u dhaliyey kooxdiisa qaran oo gaartay finalka tartakii kubadda cagta ee Qaarada Afrika, waxaana ka guulaysatay Kooxda Masar oo qaaday koobkii 2010-kii.
Bartamihii sanadkaasi, ayuu haddana waxa uu si wanaagsan ugu cayaaray kooxda qaran markii ay gashay tartanka kubadda cagta ee Dunida . Kooxda ayaa waxa ay gaartay heerkii quarter- final-ka. Da’adiisu waxay ahayd 24 sano, waxaana uu soo jiitay dareenka caalamka.
Wuxuu helay codadkii ugu badnaa dadkii cideeyey tartanka cayaaryahanka ugu wanaagsan qaarada Afrika ee sanadkaasi 2010-kii.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay, weli ma aaminin in aan ku guulaystay abaal marintan’’ ayuu yiri markii la gudoonsiiyey. ‘’ wuxuu ahaa tartan adag, marka loo eego cayaaryahnada kale ee igula jirtay tartanka’’ ayuu raaciyey.
2009 Didier Drogba –Xulka Qaran ee Ivory Coast iyo Naadiga Chelsea (England)
Kaddib dib u dhac iyo guul daro wajahday cayaaryahankan bilawgii sanadkii 2009-kii, ayaa Drogba waxa u suurtagashay in mar kale kor u soo koco. 31 gool ayuu u dhaliyey naadiga sanadkaasi,.
Waxa uu sidoo kale ku guulaystay in xukiisa qaran ee Ivory Coast uu u soo boxo cayaaraha tartanka kunadda cagta ee lagu qaday in la qabto sanadka 2010-ka.
Waxa uu ka guulaystay cayaaryananada kala ah Toure, Eto'o, Michael Essien iyo Tresor Mputu Mabi oo u ciyaara xulka Qaran ee Jamhuuriyada Demoqaraadiga ee Congo., kuwaas oo ku jiray liiska sanadkaasi loo soo xushay abaal marinta cayaaryahanka ugu wanaagsan Qaarada Afrika ee BBC-da.
2008 Mohamed Aboutrika - Egypt iyo Al Ahly (Egypt)
Aboutrika wuxuu adaa laacib aad caan u ahaa asagoo qaatay in ka badan kala bar 155,000 codadkii la riday kana badiyay Amr Zaki, Drogba, Eto'o aiyo Emmanuel Adebayor oo dabadeedna sidaa ku helay abaal marinta. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan looguna jeceyahay qarada asagoo sanadkii 2008 ka dhaliyaya goolka qura ee dalkiisa guushu ku raacday Cameroon ciyaarihii kama dambaysta ahaa ee Koobka Africa unasuurta galiyay Alahli inay soo gaadho Liigga horyaalada Afrika.
2007 Emmanuel Adebayor - Togo iyo Arsenal (England)
Gool dhaliyaha dheer ee Togo wuxuu ahaa guuleyste caan ah asagoo qaatay 42% codadka asagoo ka hor maray Drogba, iyo weliba Essien, Freddie Kanoute oo reer Mali ah iyo Eto'o.
May 2007, wax yar kagadaal markii uu dhameeyay xilligiisii oo buuxa oo uu u ciyaarayay Arsenal, Togolese-ka waxaa lagu abaal mariyay dadaalkiisa cadcadaa – iyo goolashii uu ka dhaliyay Manchester United ciyaar ka dhacday Old Trafford iyo kuwo uu ka dhashay Milan.
Wuxuu xilli ciyaareedkii xigay kubilaabay qaab wanaagsan asagoo gacan ka geystay bixitaankii laacibkii caanka ahaa ee naadiga Thierry Henry asagoo dhashay 13 gool wixii loo gaaray dhammaadkii 2007 –isla markaana ciyaar wanaagiisu u sahashay inuu soo galo Kooxda Sharafta ee Sanadka ee PFA..
2006 Michael Essien - Ghana iyo Chelsea (England)
Asagoo noqdayay wixii waagaa ahaa ciyaaryahankii kubbbada cagta ee Afrikaanka ah ee ugu qaalisanaa markii uu u saxiixayay heshiiska Chelsea Agoosto 2005, Essien wuxuu bilaabay inuu gutto waajibaadkii Stamford Bridge oo buuxa sanadkii xigay.
Durba wuxuu ku soo baxay ciyaaryahan dhexda ka dheela oo dhanka difaaca ku adag, mid isha ku haya kubadda nishaadkiisuna badan yahay- intaas oo dhan oo ahayd tayo u sahashay inuu abaal marinta BBC-da ka qaado Aboutrika, Eto'o, Drogba iyo Flavio.
Muddo ka yar sanad markii uu Chelsea ku soo biiray, Essien wuxuu ku caawiyay kooxdaasi inay ku guuleysato Premier League –ga. Wuxuu xataa soo galay liiska yar ee 30 ciyaartooy ee lagu soo xulo Laacibka Aduunka ee FIFA ee Sanadka.
2005 Mohamed Barakat - Egypt iyo Al Ahly (Egypt)
Barakat wuxuu noqday ciyaartoygii reer Waqooyi Afrika ee ugu horeeyay ee magaciisa lagu soo daro abaal marinta BBC-du bixiso ee Laacibka Afrikaanka ah ee Sanadka kadib markii uu wacdaro ka dhigay Qaahira una ciyaarayay sanad Al Ahly.
Liigoodii maxaliga ahaa ayay kusoo guuleysteen ka hor intii aysan qaadin koobka Liigga Afrka, asaga oo uu yahay Barakat kii ugu goolasha badnaa ciyaartoyda oo asagu dhashay 7 gool wuxuuna sidoo kale ku caawiyay kooxdiisa Ahly inay dhigto rikoor caalami ah oo ay noqoto koox aan laga badin 55 ciyaar oo isku xiga. wuxuu abaal marinta BBCda ka qaaday Eto'o, Essien labada ciyaartooy ee Nigeria ee Obafemi Martins iyo Jay-Jay Okocha.
2004 Jay-Jay Okocha - Nigeria iyo Bolton Wanderers (England)
Okocha wuxuu sii heystay abaal marinta sanad kadib. Wuxuu kabtan ka ahaa kooxda qaranka ee Nigeria asagoo soo gaarsiiyay booska saddexaad Koobka Africa sanadkii 2003 wuxuuna ku caawiyay Bolton inay soo gasho booska 8aad ee ciyaaraha Premiership-ka taasoo ahayd meeshii ugu sareysay ee ay ciyaarahaas ka gaaraan. Waxaa sidoo kale loo magacaabay ciyaartoyga isreebreebka. Ismuujinta noocaa ah ayaa u suurta galisay inuu ka badiyo Eto'o, Martins, ciyaartoyga Ghana ee Stephen Appiah iyo Drogba.
2003 Jay-Jay Okocha - Nigeria iyo Bolton Wanderers (England)
Okocha xilli ciyaareedkiisii buuxay ee ugu horeeyay oo qura ayaa u suurta galiyay in uu helo abaal marinta BBC-da asagoo laga hormariyay Eto'o (oo xilligaa u ciyaarayay Real Mallorca) iyo Appiah. Ciyaartiisii wacnayd ee 2002-03 ayaa usuurta galisay in si wanaagsan isha loogu hayo dabadeedna wuxuuba ciyaartii ku soo idleeyay inuu noqday ciyaartoyga naadiga ugu goolal badan markii goolashiisa laisku wada daro. Goolkiisii ugu wacnaa wuxuu ahaa mid uu ka dhaliyay meel goolka u jirta 30-yard oo uu ka dhaliyay Middlesbrough maalintii ugu dambaysay ee xilli ciyaareedka Premiership-ka taasoo kooxdiisa ku caawisay inay ku badiso 2-1 kuna sii joogto division-ka hal dhibic oo qura.
2002 El Hadji Diouf – Xulka Qaran ee Senegal iyo Naadiga Lens ee France)/Liverpool (England)
Kaddib dhibaatooyin soo wajahay oo ku qaaday in ay hoos u dhoco heerkiisa cayaarta ayaa cayaaryahanka El Hadji Diouf waxa uu suurtagashay in uu soo bandhigo kartidiisa 2002-dii.
Wuxuu door ka qaatay kooxdiisa qaran oo tartanka kubadda cagta ee Afrika ka gaartay final-ka. Waxaase kooxda ka adkaatay kooxda Cameroon.
Da’diisu waxa ay ahayd 21 sano. Kooxda Liverpool ayaa durbadiiba la booday oo qaadatay, iaydoo ay jirtay cabsi ah in uu noqdo xidig aad qaali u noqda oo lacag badan lagu iibsado.
"waxa laga yaabaa in dadka qaar ay iga aaminsanyihiin wax yaaabo aanan wanaagsanayn, balse waxaan ku kalsoonahay in ay I aamineen taageerayaasha iyo dadka xiiseeya kubadda. Iyagaana sabab u ah guusha aan gaaray’’ ayuu yiri El Hadji Diouf markii la guddoonsiiyey Abaal marinta cayaaryahanka ugu wanaagsanaa qaarada Afrika ee BBC-da sanadii 2002-dii.
2001 Samuel Kuffuor – Xulka Ghana iyo Bayern Munich (Germany)
Sammy Kuffour waxa uu gaalay guul ay yartahay cid kale oo gaartay. Wuxuu ku guulaystay Abaal marinta BBC-da isagoo ka cayaaraya Dhinaca difaaca, wuxuuna ku mutaystay guushii u soo hoyey kooxda Bayern Munich ee Jarmalka sanadii 2001-dii.
‘’ In lagu aqoonsada cayaaryahanka ugu wanaagsan Qaarada Afrika ma ah arrin sahlan, waxayna ii tahay fursad weyn’’ ayuu yiri Sammy Kuffour markii la guddoonsiiyey abaal marinta.
Wuxuu ka adkaaday cayaaryahanada El Hadji Diouf iyo Mohamed Kallon oo kula jiray liiska cayaaryahanada loo codeynayey.
2000 Patrick Mboma –Xulka Cameroon Kooxaha Cagliari/Parma (Italy)
Markii la galay qarniga cusub, waxa is badelay magaca abaal marinta oo la oron jiray Shaqasiga ugu wanaagsan Cayaaraha Qaarada Afrika ee sanadka . Patrick Mboma ayaa noqday cayaaryahankii ugu dambeeyey ee magacaasi ugu guulaysto abaal marinta.
Wuxuu ahaa Kaptanka kooxda qaran ee Cameroon, waxaana guushiisu la tilmaamayaa in ay ka dhalatay doorkii uu ku lahaa guusha ay gaartay kooxda qaran ee Cameroon sanadkaasi.
1999 Nwankwo Kanu – Xulka Qaran ee Nigeria iyo Arsenal (England)
Nwankwo Kanu wuxuu ku guuleystay abaalmarinta BBC markii labaad sanakii 1999, laba sano kadib markii uu helay darajadiisii hore kadib markii uu dib uga soo laabtay waqti adag si uu uga ciyaaro heerka ugu sareeya mar kale – asagoo saxiixay heshiis kala dhexeeyay Arsenal oo ah ciyaaraha English Premier League bishii Febraayo.
Gool dhaliyaha dheer waxaa dhaqaatiir kusoo sheegeen inuu qabo cillad dhanka wadnaha ah wax yar kadib markii uu ku biiray Inter Milan sanadkii 1996 wuxuuna sii joogay kooxdaa caanka ah ee Talyaaniga in ka badan labo sano kadib markii qalliin lagu sameeyay laakiin asagoo un ciyaaray ciyaaro tira yar intii waqtigaa lagu jiray.
Xilligiisii ugu horeeyay ee si buuxda uu u dheelo, Kanu wuxuu ka dhaliyay daqiiqadii Chelsea gool daqiiqadii 17aad asagoo bilaabay inuu mar kale goolal dhaliyo ugana badiyo 3-2 bishii Oktobar goolka saddexaadna uu ka dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay.
1997 Nwankwo Kanu – Xulka Qaran ee Nigeria iyo Internazionale (Italy)
Kanu wuxuu heshiis u saxiixay Inter Milan asagoo a yimid Ajax Amsterdam sanadkii 1996 asagoo kooxda Nigeria ugu guuleystay billad dahabi ah ciyaarihii taariikhiga ahaa ee Olombikada asbuucyo kadib, taasoo ahayd markii ugu horeysay ee Afrika ay ku guuleysato billad noocaas oo kale ah. Laakiin in wadnihiisu duleelo ayaa lagu soo sheegay wax yar kadib waxaana qalliin lagu guuleystay lagu sameeyay bishii Nofember. Bishii Abril 1997, naadigiisii ayuu ku laabtay asagoo qoyska kubbada cagtu u rajeeyeen mustaqbal wacan –maadaama uu yahay ciyaaryahan da’ yar kaasoo ku guuleystay Koobkii Yurub ee 1995 Ajaxna ay heshay fursad labaad.
Ciyaartiisii ugu horeysay waxay timid xilligii xigay laakiin intaa kadib wuxuu un ciyaaray 11 jeer -asagoo un dhaliyay hal gool – waxaana la siiyay hal fursad oo kale oo qura mar kale ka hor intii uusan aadin Arsenal Febraayo 1999.
Billada BBC ay siisay 1997 waxaa lagu siiyay kartidiisa uu muujiyay iyo sama doonimada asagoo ciyaarta ku soo laabanayay dhibka weyn ee dhanka wadnaha asiibay kasokow.
1996 Emmanuel Amuneke – Xulka Qaran ee Nigeria iyo Sporting (Portugal)/Barcelona (Spain)
Emmanuel Amuneke wuxaa uu helay billada BBC kadib markii uu dhaliyay goolkii lagu soo khatimay mid ka mid ahayd guulihii dhanka kubbada cagta ahaa ee ugu diiranaa ayadoo kooxda Nigeria ay si tartiib ah ugu guuleysatay billadii dahabiga ahayd ee dal Afrikaan ah uu abid ka helo ciyaaraha Olombikada. Amuneke – oo ciyaaray ciyaar walba oo Nigeria ciyarahaa kaga qeybgalaysay ayaa goolka dhaliyay daqiiqadii 90aad kadib markii 1994 horyaalada Afrika looga badshay 2-1 ayadoo ciyaarta ay ka harsanayd 16 daqiiqo.
1995 George Weah –Xulka Qaran ee Liberia iyo AC Milan (Italy)
BBC abaalmarinteedu waxay ahayd mid ka mid ah kuwo badan oo George Weah uu ku guuleystay 1995 asagoo sidoo kale abaal marino ka helay Afrika iyo Yurub iyo Caalamka oo dhan ayadoo Liberia uu yahay wadanka qura ee Afrikanka ah ee helay abaal marinta sharafta leh ee Fifa.
Wuxuu uga adkaaday loolanka Paolo Maldini iyo Jurgen Klinsmann.
Weah sanadkii 1995 wuxuu noqday laacibkii ugu goolasha badnaa ciyaaraha Champions League. Wuxuu sidoo kale ku guuleystay isla sanadkaa 1995 inuu kooxda wadankiisa ee Lone Star uu gaarsiiyo tartanka qaarada. Markii uu ka tagay Paris oo uu aaday Milan, Weah wuxuu dhaliyay 11 gool xilligii xigayna waa uu ka badiyay goolasha League-ga intaa asagoo goolal badan ka dhaliyay Verona sanadkii 1996.
1994 Kooxda Qaranka ee Zambia
Taariikhda kubbada cagta ee Zambia waxaa in badan wax laga qoray Abriil 1993 markii diyaarad siday kooxdaa oo u waday ciyaaro loogu soo baxayay Koobka Aduunka kana dhacaysay Senegal ay ku burburtay xeebta Gabon, taasoo ay ku nafwaayeen dhammaan 30 qof oo saarnaa oo ay kujireen 18 ka mid ah dalkaa ciyaartoydiisii ugu caansanaa ee kubbada cagta. Laakiin nasiib wanaag ciyaartoygii taariikhda Zambia ugu caansanaa Kalusha Bwalya ayaan diyaaradaas saarnayn asagoo si toos ah u imaan lahaa Dakar maadaama uu ka soo laabanayay Yurub oo uu uga ciyaari jiraya PSV Eindhoven.
Laakiin sida kooxda Zambia ay uga soo kabatay musiibataa weyn oo wadankooda ay mid ku kalsoon uga dhigtay ma aysan halmaamin dadkii ugu codeeyay abaalmarinta BBC-da.
Frankie Fredericks weligiiba caanka ahaa wuxuu noqday orodyahankii ugu horeeyay eek u guuleysta abaalmarinta BBC ee Shakhsiga Ciyaartoyga ah ee Sanadka alyacni BBC's Sports Personality of the Year award kadib markii uu noqday horyaalkii caalamiga ahaa ee Namibia ee ugu horeeyay, saddex sano un kadib markii dalkaasii helay madax bannaanidiisa. Asagoo sanadkaa Horyaalada Orodyahanada Caalamka tartankooda uga qeybqaadanayay gudaha Stuttgart, Fredericks wuxuu uga qaaday John Regis iyo Carl Lewis oo u ordayay Great Britain asagoo dhigay rikoor ah 19.85 il biriqsi.
1992 Abédi Pelé – Xulka Qaran ee Ghana iyo Marseille (France)
Abedi Pele wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Sanadka ee Xiddigga Isboortiga Afrika ee BBC ee abid ugu horeysay sanadkii 1992 asagoo markaa u dheelayay naadi Faransiis ah oo layiraahdo Marseille. Wuxuu sidoo kale hal yey ka ahaa kooxdii Ghana ee gaadhay ciyarihii kama dambaysta ee Koobka Afrika ee 1992 ka dhacay Senegal, balse Ivory Coast ay ugaga badisay rigooreyaasha.
Waxaa loo magacaabay inuu yahay ciyaartoyga ugu wanaagsan ee is reebreebka ee isreebreebka asagoo lahaa goolasha ugu sareeya-waa intii uu u ciyaarayay Marseille.
Sanadkaa dabayaaqadiisii, xiddiggaa Marseille wuxuu mar kale u dabbaal dagayay rikoorkiisa dhanka Faransa ah maadaama uu dhigay guushiisii league-ga ee afaraad ee tooska ahayd aygoo afartuba ay isku xigeen.
Ayagoo ku daysanayay Pele, ayaa Marcel Desailly iyo Basile Boli – oo dhammaan asal kuleh Afrika waxay bilaabeen xilli ku dhammaaday guusha Marseille maadaama ay uga adkaadeen Milan ciyaarihii kama dambaysta ahaa sanadkii 199.